အထွေထွေဗဟုသုတ Archives - Page 54 of 57 - Lupyo News
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်
April 25, 2020 by Lupyo News
မိန်းမခိုးမည့်ညမှာ ဆက်ဖီဆွဲတတ်လွန်းတဲ့ ညီမသိသွားလို့ နွားဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ် “ကိုရီး ကုပ်​​ချောင်း​ချောင်းနဲ့ ဘာလုပ်​​နေတာလဲ” “ငင်​ … ” လှည့်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ ကျုပ်​ညီမ​ဗျ အိပ်​ချင်​မူးတူးနဲ့ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာတယ်​…” နင်​ခုထိ မအိပ်​​သေးဘူးလား ”“အိပ်​မက်​ထဲမှာ ကိုရီး မိန်းမသွားခိုး မယ်​လို့ မက်​လို့ လန့်​နိုးလာတာ ”” ငါ့နှယ်​ အဲဒါမက်​တာနဲ့ လန့့်​နိုးစရာလား ”” နိုးတာ​ပေါ့ ကိုရီးနဲ့ညားပြီး ဘယ်​ငတိမ ကံဆိုးမလဲပဲ စိတ်​ပူနေရတာ ” ” ငိမ့်​ … ” မောင်​နှမ အချင်းချင်း​တောင်​ ကပ်​ဖဲ့​နေ​သေးတယ်​“က​လေး​နေရာ က​​လေး​နေစမ်းပါဟာ သွားအိပ်​​တော့ ”“ဒါနဲ့ ကိုရီးက ဘယ်​သွားမှာလဲ”“အဟိမ်း ” (ပီတိသံကြီးနဲ့ )“မိန်းမသွားခိုးမလို့ … ” “ဟယ်​ ဘယ်​သူ့ကိုလဲ ”“​ တောင်​ပိုင်းက စက်​သူ​ဌေးသမီး … Read more
ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ
ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားပါ.. မိန်းကလေးတုိုင်းဟာ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းချင်ကြပါတယ်။ ကုိုယ့်အပေါ်ပျော်ရွှင်မှု၊ ဂရုစုိုက် မှုပေးနုိုင်ပြီး သစ္စာရှိတဲ့ယောကျာ်းမျိုးနဲ့ပဲ ဆုံဆည်းချင်ကြပါတယ် …… အောက်ပါအချက်လေးတွေနဲ့ ကုိုက်ညီတဲ့ချစ်သူကောင်လေးမျိုးကုို ရထားပြီးပြီဆုိုရင် သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရော သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကြားမှာပါ သင့်ကုိုဝိုင်းပြီးအားကျရမယ့် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချစ်ရေးကုို ပုိုင်ဆုိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ၁။ ဦးစားပေးမှုမှာ သင်ကနံပါတ်တစ်ပဲ ။ အလုပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသုိုင်းအဝိုင်းမှာ ဖြစ်စေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းကြားမှာ ဖြစ်စေ သင်နဲ့ယှဉ်ရမယ့် ကိစ္စမျိုးရှိလာခဲ့ရင် သင့်ကုိုပဲ ပထမဦးစားပေး ရွေးချယ်မယ့် သူမျိုးပါ။ သင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကျန်းမာရေးကုိုလည်း သူကအမြဲစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့သူမျိုးပါပဲ …. ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှသာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ … Read more
“ခိုးစားနေတဲ့သူတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံသင့်သလဲ”
April 24, 2020 by Lupyo News
“ခိုးစားနေတဲ့သူတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံသင့်သလဲ” ဒီကိစ္စက လွယ်မလို့နဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စလို့အများစုကတော့ယူဆကြပါတယ်။ ကျွန်မကတော့အဲဒီိလို မယူဆပါဘူး။ ကျွန်မကို မကြာခဏဖုန်းဆက်ပြီး ရင်ဖွင့်ကြတဲ့ ထဲမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဖောက်ပြန်နေလို့။ ဇနီးဖြစ်သူက ဖောက်ပြန်နေလို့…ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ကြတာက ၉ ၀% လောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မိသားစု ပြိုကွဲမှာ စိုးလို့ ကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ပေမဲ့ မရပါဘူး ဆိုတာမျိုါ်ကိုလည်း စိတ်မသက်သာစွာနဲ့ကြားနေရပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ကိုယ့်မှာ အဲဒီိလို ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့၊ အခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စဉ်းစားလို့ရတာလေးတွေကိုတော့ပြန်ပြီး မျှဝေချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပိုင်ရှင်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်အသိမပေးဘဲနဲ့ယူသုံးတာ ခိုးမှုမြှောက်ပါတယ်။ ကာမပိုင်ရှိတဲ့ ခင်ပွန်း(သို့မဟုတ်) ဇနီးသည် နဲ့ ငြိစွန်းတာက ဥပဒေအရလည်း ခိုးမှုမြှောက်သလို၊ ဘာသာရေးရှု့ထောင့်ကနေ ကြည့်ရင်လည်း ဒုသနသော မြောက်တာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် လူမှုရေးအနေနဲ့ … Read more
မိန်းကလေး အလှ အိပ်ယာ ထ တဲ့ …
မိန်းကလေးအလှ အိပ်ယာထ၏ အဓိပ္ပါယ် မိန်းကလေး အလှ အိပ်ယာ ထ တဲ့။ ဒီ ဆိုရိုးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မသိတဲ့ သူတွေ ရှိနေကြ ပါလိမ့် မယ် ။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အဆိုအရ မိန်းကလေး ရယ်လို့ ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီ ဆိုရင် အရွယ်ရောက် လာလို့ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အခါမှာ ကိုယ် လက် သန့်စင်မှုနဲ့ အစပြု ရပါ တယ် ။ ထို့နောက် မိမိအိမ်မှာ ရှိတဲ့ ဘုရားအား ပန်း ရေချမ်း ၊ ဆီမီးပူဇော်ခြင်း ၊ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း ၊ ရှိခိုး ထိုက်သူ ရှိခိုးပူဇော်ခြင်း စတဲ့ အလုံးစုံ ပူဇော်မှုတွေဖြင့် နေ့သစ်မှာ မင်္ဂလာ ယူရ ပါတယ် … Read more
စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်ခြင်းတွေကို အနိူင်ယူနည်း
တစ်ကယ်တော့ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာ အဆင်မပြေခြင်းတွေ စုပေါင်းလာခြင်းက မခံစားနိူင်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်တတ်တဲ့သူက ထောင်ကျသွားတဲ့ လူနဲ့အတူတူပါပဲ အမှန်တော့ အဲ့ဒီထောင်ထဲကို သူများကပို့တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရောက်အောင် တွန်းပို့လိုက်ခြင်းပါပဲ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုကျော်လွန်တာနဲ့ ပြီးဆုံးသွားမဲ့ ပြဿနာတွေကို အချိန်အကြာကြီး ခေါင်းထဲထည့်ထားတတ်တဲ့ သင့်စိတ်ကြောင့်သာစိတ်ဓာတ်ကျရောဂါက မလွတ်ကင်းနိူင်ကြတာပါ။ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ပြဿနာတွေကို မေ့ပြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို အကောင်းဆုံးပုံမှန်ဖြစ်အောင် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည် တည်ဆောက်ကြည့်ပါ။ တစ်ချို့အရာတွေကို အရမ်းခံစားနေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဥပမာ- ချစ်သူအချင်းချင်း မချစ်လို့ ပြစ်သွားတဲ့ သူတစ်ယောက်အပေါ် ကြာကြာစွဲလမ်းတတ်တဲ့ စိတ်က မိမိကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်ကျ အားငယ်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ အရေးအပါဆုံးပါပဲ။ သူ့အကြောင်း ကိုယ်သိ ကိုယ့်အကြောင်းသူသိပြီး မိမိရဲ့စိတ်ညစ်စရာတစ်ချို့ကို နားလည်ပေးနိူင်ပြီး … Read more
April 23, 2020 by Lupyo News
ဆွမ်းလေး တစ်ဇွန်း လောင်းလှူခဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိခဲ့သည့် ကြီးမားသော အကျိုးထူး မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်တော် အခါက ကဋစ္ဆုဘိက္ခာထေရီ ရဟန္တာမကြီး ဆိုတာ ရှိတယ် သူဟာ ( ၉၂ )ကမ္ဘာထက်၌် အမျိုးကောင်း သမီး ဖြစ်ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ တိဿမြတ်စွာ ဘုရား ဆွမ်းခံကြွ လာတော်မူတော့ ဆွမ်းကလေး တစ်ဇွန်းကို လောင်းလှူခဲ့ တယ် အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့် သေတဲ့အခါ တာဝတိံသာမှာ နတ်မင်းကြီးတို့ရဲ့ မိဖုရားအဖြစ်နဲ့ ( ၃၆ ) ကြိမ် စကြာဝတေးမင်း မိဖုရားနဲ့ အကြိမ် ( ၅၀ ) သံသရာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက်လုံး လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာမှန်သမျှကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ အလိုရှိ တိုင်း ရခဲ့ ပါတယ်။ … Read more
မိဘနှစ်ပါးလုံးကို မြုပ်နှံထားတဲ့ သင်္ချိုင်းမြေပုံအနားသွားပြီး “မေမေရေ..မေမေရေ” ဆိုပြီး အော်ခေါ်နေခဲ့တဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့သားလေးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလေးတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းကတော့ တစ်ချိန်ချိန်တစ်နေ့နေ့မှာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့ ကြုံဆုံ ၊ ကွဲကွာ ၊ ထားရစ်ခဲ့ရမှာပါပဲလေ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း 2နှစ်သားအရွယ် မလေးရှားနိုင်ငံက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကားအက်ဆီးဒင့်ကြောင့် မိဘနှစ်ပါးလုံးကို တစ်ကြိမ်ထဲမှာပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ မိခင်ကို အတော်လေးလွမ်းဆွတ်နေခဲ့တဲ့ သားငယ်လေးဟာ မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့ သဲမြေပုံလေးအကြား သဲမြေတွေနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တာကို မခံစားနိုင်လို့ ကလေးငယ်ရဲ့အဖြစ်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူက Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝေမျှသွားပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဒေါ်ဖြစ်သူ ရေးသားထားခဲ့တာကတော့.. ကလေးငယ်က အမေနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို မြုပ်နှံထားတဲ့ နေရာကိုခေါ်လာပေးခဲ့တာပါ ။ သူ့ရဲ့အမေကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်ချိန်မှာတော့ ကလေးငယ်က “မေမေရေ..မေမေရေ” ဆိုပြီးအော်ခေါ်နေခဲ့တာပါ ။ ကလေးငယ်က အိမ်ခေါ်ပြန်လို့လည်းမရတော့ပါဘူး ။ အိမ်မှာသဲတွေလုံးဝမဆော့တဲ့ကလေးက ဒီမှာကျသဲမြေတွေနဲ့ဆော့ကစားနေခဲ့တာပါ … Read more
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား….
April 22, 2020 by Lupyo News
သင်ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုံစံက ပြောပြနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား… ၁။လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ကိုင်တဲ့ပုံစံ သင်ကဖုန်းကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ကိုင်သုံးတတ်သူ ဆိုရင်သင်ဟာ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်.. ဒါပေမဲ့ အချစ်ရေးမှာတော့ ကွဲပြားတယ် relationship တစ်ခုကို မစခင်မှာသင်ဟာ ဒီလူကို တကယ်ပဲဘဝ အတွက် လိုအပ်သလား ဆိုတာကို အချိန်ယူ စဉ်းစာတယ် ဒါကြောင့် လူတွေက သင့်ကိုတစ်ယောက်တည်းနေတတ်တယ် ရှက်တတ်တယ် လို့ထင်ကြတယ်။ ၂။ဖုန်းကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီးနောက် လက်ရဲ့လက်မ နဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့ပုံစံ သင်ဟာစမတ်ကျ တယ် အမြော်အမြင် ရှိတယ်။ ကျိုးကြောင်း ဆီလျှော်စွာတွေးတတ်တယ် သင်ဟာ တစ်ခုခု မလုပ်ခင်မှာကြိုတင်စဉ်းစား တတ်တဲ့လြူ ဖစ်တယ် ဒါပေမဲ့ အချစ်ရေးမှာတော့ … Read more
သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား….???
”သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား???” စိန်ခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်ဟာ ကွက်ခနဲ မျက်နှာပျက်သွားတယ် စိတ်ထဲမှာလည်း ပူကနဲရှက်သွားတယ် လူမိုက်အဖြစ် ထင်ရှားသူ လက်သွက်သူ လက်ရဲသူအဖြစ် ထင်ရှားသူတစ်ယောက်ကို ယှဉ်ထိုး ဖို့ နိုင် နိုင်ချေက နည်းပါးလွန်းတယ်…. ရှောင်ထွက်ဖို့ကလည်း ခက်နေတယ် ကြောက်ရွံ့နေသလိုလည်း ခံစားရတယ် ဒေါသလည်း ထွက်တယ..် ”ဟေ့ကောင် ငါပြောတာကြားလား ငါမင်းကို မျှမျှတတ စိန်ခေါ်တာ မထိုးရဲဘူးလား မင်းအခြောက်လား” အဲ့ဒိအချိန်မှာ လူတစ်ယောက်က ဝင်ပါလာတယ်… ”စိန်ခေါ်တဲ့ညီလေး မိတ်ဆက်ရ ဦးမယ် ကိုယ်က ဒီက နယ်ထိန်းပါ” စကားမဆုံးခင် လူမိုက်ဆိုသူ မျက်နှာ အမူအရာပြောင်းသွားတယ်… ”မကြောက်ပါနဲ့ကွ အရေးယူဖို့မဟုတ်ဘူး ညှိုနှိုင်းပေးမလို့ တားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး…. မင်းက ပြောတယ် သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်း ထိုးမလား … Read more
April 21, 2020 by Lupyo News
သူလဲ သူ့အတ္တနဲ့သူ ပျော်နေမှာဖြစ်သလို ကိုယ်လဲ ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းနေ မှာပါ … ကိုယ့်မေတ္တာနဲ့ကိုယ် အေးချမ်းနေမှာပါ အနိုင်လို ချင်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော် အမြဲ အရှုံးပေး ခဲ့တယ် အထက်စီ ကပဲ ဆက်ဆံချင် သူတွေကိုကျွန်တော် အမြဲ အောက်ကျို့ပေး ခဲ့တယ် ။ ဘဝင်မြင့်နေ တဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ရင်ကျွန်တော် အမြဲ ခေါင်းငုံ့ပေး ထားတယ် ။ လိမ်ညာ တက်သူတွေ နဲတွေ့ရင် မသိချင် ယောင်ဆောင် ပေးတယ် ။ အပြောသန်တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ရင် ဆွံအ သလိုမျိုးေ နပေးလိုတ် တယ် ။ နားလည်မှု မရှိတဲ့ သူတစ် ချို့ကို တက်နိုင် သလောက်တော့ ရှင်းပြပေး တယ် … Read more